Wada-hawlgalayaasha waaweyn ee amniga: Mareykanka oo amaanay Baxrayn, Imaaraadka heshiiskii Israel kadib | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wada-hawlgalayaasha waaweyn ee amniga: Mareykanka oo amaanay Baxrayn, Imaaraadka heshiiskii Israel kadib
Wada-hawlgalayaasha waaweyn ee amniga: Mareykanka oo amaanay Baxrayn, Imaaraadka heshiiskii Israel kadib
Bayaanka Aqalka Cad wuxuu ku xirayaa magacaabista heshiiska caadiga ah ee lala yeelanayo Israa’iil, iyadoo la sheegay inay ka turjumeyso ‘geesinimo aan caadi aheyn’
Magacaabista Aqalka Cad waxay imaaneysaa maalmihii ugu dambeeyay maamulka madaxweyne Donald Trump
Mareykanka ayaa ugu yeeray Baxrayn iyo Isutagga Imaaraatka Carabta “wada-hawlgalayaasha amniga ee ugu waaweyn” Sabtidii, oo aan horay loo maqal magacaabista labada dal oo hoy u ah hawlgallada waaweyn ee militariga Mareykanka.
Dhinaca kale, Madaxweyne Donald Trump wuxuu Jimcihii Marooko ku helay maamuuskiisii ​​ugu sarreeyay shaqadiisa xagga horumarinta heshiiska caadiga ah ee u dhexeeya boqortooyada iyo Israa’iil.
Qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ayaa ku xirey magacyada “wada-hawlgalayaasha amniga ee ugu waaweyn” ee Bahrain iyo Imaaraadka Carabta (UAE) inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israel, iyagoo leh “waxay ka tarjumaysaa geesinimadooda, go’aankooda iyo hoggaankooda aan caadiga ahayn”. Waxaa sidoo kale lagu xusay in labada dal ay muddo dheer ka qeyb qaadanayeen dhoolatusyada militariga Mareykanka.
Ma aysan caddeyn waxa loogu magac daray Baxrayn, boqortooyo jasiirad ah oo ka baxsan Sacuudi Carabiya oo ku taal Gacanka, iyo Imaaraadka, oo ah federaal ka kooban toddobo aqal oo ku yaal Abu Dhabi iyo Dubai.
Baxreyn waxay hoy u tahay Maraakiibta Shanaad ee Ciidanka Badda Mareykanka, halka dekedda Jebel Ali ee Imaaraadku ay tahay dekedda ugu mashquulka badan maraakiibta dagaalka Mareykanka ee ka baxsan Mareykanka. Baxreyn waxay martigalisaa ilaa 5,000 oo ciidamo Mareykan ah halka Imaaraadku martigeliyo 3,500, inbadan oo kamid ah Saldhiga Cirka ee Al-Dhafra.
Mareykanku wuxuu adeegsadaa magacaabista “xulafada weyn ee aan ka tirsaneyn NATO” si uu u sharaxo xiriirka uu la leeyahay Kuwait, oo martigaliya taliska hore ee Ciidamada Mareykanka ee Bartamaha. Magacaabistu waxay siinaysaa waddan tixgelin maaliyadeed iyo mid milatari oo gaar ah waddammada aan ka tirsanayn NATO. Baxrayn sidoo kale waa xulafo aan NATO ahayn.
Taliska Dhexe ee Milatariga Mareykanka iyo Pentagon-ka isla markiiba kama aysan jawaabin codsi faallo ah. Kooxda Shanaad waxay u gudbisay su’aalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda, oo aan isla markiiba ka jawaabin codsi faallo ah.
Magacaabista Aqalka Cad waxay imaaneysaa maalmihii ugu dambeeyay ee maamulka Trump. Madaxweynaha ayaa xiriir dhow la yeeshay wadamada Khaliijka Carabta intii uu xafiiska joogay taas oo qayb ka ahayd mowqifkiisii ​​adkaa ee Iran. Taasi waxay dhalisay dhacdooyin isdaba-joog ah oo sii kordhaya oo u dhexeeya waddamada ka dib markii Trump uu si keli ah uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ay la gashay quwadaha adduunka.
Waxay sidoo kale timid kadib markii Baxrayn iyo Imaaraadku ku biireen Masar iyo Sacuudi Carabiya bilowgii si loo xaliyo qaadacaad sannado badan qaadatay oo Qatar ah, waddan kale oo Khaliij Carab ah oo hoy u ah Saldhigga Cirka ee Al Udeid oo martigaliya saldhigga hawlgallada ee Taliska Dhexe ee Mareykanka. Qaadacaaddaasi waxay bilaabatay maalmihii ugu horreeyay ee xilligii Trump uu xafiiska joogay ka dib markii uu booqday Sacuudi Carabiya safarkiisii ​​ugu horreeyay ee dibadda.
Heshiiska Israel iyo Morocco
Morocco waxay ka mid tahay afar dal oo Carab ah oo ay ka mid yihiin Imaaraadka, Baxreyn iyo Suudaan oo ogolaaday inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israel.
Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa laga soo xigtay inuu yiri xaflad gaar ah ayaa lagu qabtay Xafiiska Oval halkaas oo Princess Lalla Joumala Alaoui, oo ah safiirka Morocco ee Mareykanka, ay Trump siisay Amarka Muxammad, abaalmarin la siiyo kaliya madaxda dalalka. Abaalmarintu waxay ahayd hadiyad ka timid Boqorka Marooko, Mohammed VI.
Lataliyaha sare ee Aqalka Cad Jared Kushner iyo ergeyga Bariga Dhexe Avi Berkowitz ayaa helay abaalmarino kale shaqadooda ku aadan heshiiska Israel iyo Morocco, kaas oo la gaaray bishii December.
Trump, oo xafiiska ka tagaya Arbacada, ayaa dhaleeceyn xoog leh kala kulmay heshiiska Morocco maxaa yeelay si loo xiro heshiiska, wuxuu ogolaaday Mareykanka inuu aqoonsan doono madaxbanaanida Morocco ee Galbeedka Saxaraha.
Galbeedka Saxaraha ayaa ahayd goob ay ka taagnaayeen muran dhuleed muddo tobannaan sano ah u dhexeeya Marooko iyo Jabhadda Polisario ee ay taageerto Aljeeriya, oo ah dhaqdhaqaaq ka goosad ah oo doonaya inuu ka dhiso gobol madax bannaan dhulkaas.
Kooxda Kushner waxay ka shaqeynayeen sidii heshiisyo badan loo dhex dhigi lahaa Israel iyo dunida Carabta. Laakiin waqtigu wuu dhammaaday oo wax intaa ka badan lama filayo ka hor bixitaanka Trump.
Warbaahinta looma oggolaan inay goobjoog ka ahaato xafladda abaalmarinta Morocco. Trump ayaa xaddidayay muuqaalkiisa guud tan iyo markii looga adkaaday doorashadii dhacday November 3.
Previous articleMajor security partners: US hails Bahrain, UAE after Israel deal
Next articleMaxaad ka taqaana shirkad duulimaad sheegato, lakiin alaabta dadka dhacdo.
Qaramada Midoobay ayaa War kasoo saartay shirkii hordhaca ahaa ee maanta ka dhacay teendhada Afisiyooni, kaasoo ay ka qeyb galeen qaar ka mid ah...
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa “Waalidiinta Caruurtooda looga qaaday askarnimada Eritrea Mucaaradka ma...
Beesha caalamka oo fariin cusub u dirtay Madaxda DF iyo dowlad...